Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Job 30
Nepali New Revised Version, Job 30
1 “तर अब जवानहरू ममाथि ठट्टा गरेर हाँस्‍छन्‌, ती मानिसहरू, जसका बाबुहरूलाई मेरा भेड़ा रुँग्‍ने कुकुरहरूसँग राख्‍न पनि म अयोग्‍य ठान्‍थें।
2 तिनीहरूका बलिया पाखुरा मेरो निम्‍ति के कामको थियो? किनभने तिनीहरूको शक्तिशाली पुरुषार्थ खतम भइसकेको थियो।
3 तिनीहरू यति धेरै गरीब र भोकाएका हुन्‍थे, कि राती उजाड़ ठाउँहरूका सुक्‍खा ठाउँमा तिनीहरू घुम्‍थे।
4 खानका निम्‍ति तिनीहरू नुनिलो झार र ऐरेलु र झ्‍याउका जराहरू उखेल्‍थे।
5 तिनीहरू मानिसहरूको समाजबाट लखेटिएर, हल्‍लाखल्‍लासाथ चोरहरूझैँ खेदिएका भएर
6 तिनीहरू सुक्‍खा खोलाका सतहमा, जमिनका प्‍वालहरू र चट्टानका चिराहरूमा बस्‍थे।
7 पशुहरूजस्‍तै तिनीहरू झाड़ीहरूमा कराउँथे, र पोथ्राहरूमुनि गुटमुटिएर बस्‍थे।
8 नीच घरानामा जन्‍मेका बेनामी मानिसको दल जो देशबाट खेदिए।
9 “अब मलाई तिनीहरूका छोराहरू गिल्‍ला गर्दछन्‌, तिनीहरूका बीचमा म ठट्टाको पात्र बनेको छु।
10 तिनीहरू मलाई घीन गर्दछन्‌, तिनीहरू मबाट टाढ़ा रहन्‍छन्‌, तिनीहरू मेरो मुखमा थुक्‍न हिचकिचाउँदैनन्‌।
11 परमेश्‍वरले मेरो धनु फुकालिदिनुभएको र मलाई पीड़ा दिनुभएको हुनाले, तिनीहरू मेरो विरुद्धमा आफ्‍ना सारा रीस पोखाउँछन्‌।
12 तिनीहरू मेरो दाहिनेतिर मलाई आक्रमण गर्छन्‌, तिनीहरू मेरो खुट्टाको लागि पासो थाप्‍छन्‌, तिनीहरू आफ्‍ना घेरा-मचान मेरो विरुद्धमा खड़ा गर्छन्‌।
13 तिनीहरू मेरो बाटो भत्‍काइदिन्‍छन्‌, कसैको सहायताविना नै तिनीहरू मलाई नाश गर्न सफल हुन्‍छन्‌।
14 भ्‍वाङ्ग परेका प्‍वालहरूबाट तिनीहरू अटाई-नअटाई पस्‍छन्‌, भत्‍केका पर्खालबाट तिनीहरू ठेलमठेल गर्दै आउँछन्‌।
15 त्रासमाथि त्रासले मलाई घेर्छ, त्‍यसले मेरो गौरवलाई बतासले झैँ उड़ाएर लैजान्‍छ, मेरो सुरक्षाचाहिँ बादलझैँ हराइहाल्‍छ।
16 “अनि अब मेरो प्राण मभित्रै शेष हुँदै जाँदैछ, र कष्‍टका दिनहरूले मलाई आफ्‍नो पन्‍जामा पक्रेका छन्‌।
17 राती पीडाले मेरो हड्डी-हड्डीमा घोच्‍छ, र मेरा पीडाहरूले कहिल्‍यै आराम लिँदैनन्‌।
18 परमेश्‍वर आफ्‍नो शक्तिमा मेरो लुगाझैँ हुनुभएको छ, कमीजको कठालाले झैँ उहाँले मलाई घाँटीमा अँठ्याउनुहुन्‍छ।
19 परमेश्‍वर आफैले मलाई हिलोमा जाकिदिनुभएको छ, र म धूलो र खरानीसरह भएको छु।
20 “हे परमेश्‍वर, सहायताको लागि मैले तपाईंलाई पुकारें, तर तपाईंले मलाई जवाफ दिनुभएन, मेरो मामिला पेश गर्नलाई म खड़ा हुन्‍छु, तर तपाईं वास्‍ता गर्नुहुन्‍न।
21 तपाईं मलाई निष्‍ठुरताको व्‍यवहार गर्नुहुन्‍छ, र आफ्‍नो सारा शक्तिले मलाई सताउनुहुन्‍छ।
22 मलाई झट्‌कारेर आँधीको अघि फालिदिनुहुन्‍छ, र प्रचण्‍ड आँधीमा मलाई फ्‍याँकिदिनुहुन्‍छ।
23 मलाई थाहा छ कि तपाईंले मलाई मृत्‍युको हातमा सुम्‍पनुहुन्‍छ, त्‍यस ठाउँमा, जो सबै जीवितहरूका निम्‍ति तपाईंले ठहराउनुभएको छ।
24 “आफ्‍नो दु:खमा सहायताको लागि पुकार्दा तोड़िएको मानिसमाथि कसैले हात उठाउँदैन।
25 आफ्‍नो जीवन कष्‍टमा बिताउनेको निम्‍ति के म रोइनँ र? के गरीबको निम्‍ति मेरो मन दुखेन र?
26 तापनि जब मैले भलाइको आशा गरें, दुष्‍टता पो आइलाग्‍यो, उज्‍यालोको प्रतीक्षा गरेको थिएँ, तर अँध्‍यारो पो आयो।
27 मभित्रको हलचल कहिल्‍यै थामिँदैन, कष्‍टका दिनहरू मैले भोग्‍नुपर्छ।
28 म कालो भई हिँड्‌छु तर सूर्यले ता होइन; सहायताको निम्‍ति बिन्‍ती गर्नलाई, म सभामा खड़ा हुन्‍छु।
29 स्‍यालहरूको म भाइ भएको छु, लाटोकोसेराहरू मेरा साथी भएका छन्‌।
30 कालो भएको मेरो छाला पत्रै-पत्र भएर झर्छ, र जरोले मेरो शरीर जलेको छ।
31 वीणाको लय ता मृत्‍युको गीत भएको छ, मेरो बाँसुरीचाहिँ रुनेहरूको सोरझैँ भएको छ।”
Job 29 Choose Book & Chapter Job 31